Hisy fiantraikany amin’ny zo hanala zaza ny fihibohana any Kolombia, hoy ny mpisolovavan’ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Inona no mitranga rehefa mila mamarana vohoka mandritra ny fihibohana ?
Voadika ny 17 Avrily 2020 6:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, বাংলা, Ελληνικά, русский, عربي, українська, Português, Nederlands, Español
Sarin'i Alvaro Bejarano, eo ambanin'ny lisansa Pixabay.
Zahao ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fomba iadian'ny vehivavy amin'ny herisetra mifototra amin'ny fanavakavahana any Amerika Latina sy ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Na dia ilaina aza ny fiarovana ny olom-pirenena ara-pahasalamana dia mety hanakana ny vehivavy Kolombiana sy Venezoeliana ho any amin'ny sampan-draharaha izay ilain'izy ireo amin'ny fahasalamana ara-pananahana sy ara-piterahana ny fepetra noraisin'ny governemanta Kolombiana hamehezana ny tsimokaretina COVID-19, ao anatin'izany ny fihibohan'ny firenena sy ny fanakatonana ireo sisintany.
“Amin'izao vanim-potoan'ny areti-mandringana izao, mbola ilaina ny sampan-draharaha hanaovana fanalan-jaza azo antoka, ny fanaovana fanabeazana aizana ary ny fiarovana amin'ny herisetra ara-nofo sy ny fanararaotanany vehivavy,” hoy i Selene Soto, mpisolovava iray avy ao amin'ny Fikambanana Women’s Link Worldwide (Rohin'ny Vehivavy Manerantany) ao Bogota, tamin'ny Global Voices.
Any Kolombia, ara-dalàna amin'ny lafiny telo ny fanalan-jaza: ny olana lehibe amin'ny tsy fahatomombanan'ny vohoka, raha toa ka mety hahafaty ilay reny na hanimba ny fahasalamany izany ary ny fanolanana. Na dia teo aza ny didim-pitsarana teo aloha izay nanohana io zo io dia mbola tsy ampy ihany koa ny fampahafantarana ny torohay sy ny sakana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay manakana ny vehivavy sy ny tovovavy, indrindra any amin'ny faritra mahantra sy lavitra, mba hanara-maso hatramin'ny famaranana ny fiterahan'izy ireo.
Tsy ara-dalàna ary mahavoasazy iray ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina ny fanalan-jaza atao ivelan'ireo antony telo ireo. Amin'ny fotoanan'ny fihibohana, maro ny vehivavy, indrindra ny mahantra indrindra sy ny any faritra ambanivohitra no mety tsy hanaraka ny torolàlana ara-dalàna sy ara-pahasalamana momba ny fitondrana vohoka ary mety hanala zaza amin'ny fomba tsy azo antoka ao an-trano.
Ho an'i Soto, “raha tsy narafitra ao anatin'ny zon'olombelona ny politikan'ny fahamehana ara-pitsaboana sy ny didim-panjakana na tsy narafitra avy amin'ny vinan'ny miralenta dia ho maro ny vehivavy ho tandindomin-doza sy tsy ho voaaro.”
Ao anatin'ny fihibohana manerana ny firenena i Kolombia hatramin'ny 13 Aprily ary mety mbola hihitatra izany. Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, miisa 798 ny tranga COVID-19 voamarina ary miakatra hatrany ny tarehimarika. Ireo olona noho ny antony manokana ihany no avelan'ny governemanta mivezivezy, ao anatin'izany ny fiantsenana sakafo sy ny fandehanana any amin'ny tobim-pahasalamana, ankoatra ny hafa, saingy tsy voalaza ao kosa ny zo ara-pahasalamana amin'ny fananahana sy ny fiterahana.
Hampandoavina lamandy ireo izay tsy manaraka ireo fepetra amin'ny tsy maintsy hihibohana ireo na mety hisazy hatramin'ny 8 taona an-tranomaizina.
“Tokony ahitana ireo servisy ahafahana manohy sy manome antoka ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny fananahana sy ny fiterahana ireo antony manokana ireo,” hoy i Selene Soto. “Fa tsy ny fahafahana manala zaza fotsiny ihany akory fa indrindra amin'ny fanabeazana aizana sy ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy iharan'ny herisetra ara-nofo”.
Ohatra, nilaza i Soto fa raha misy vehivavy any amin'ny faritra lavitra mila manala zaza ka mitaky fandefasana any amin'ny ivon-toeram-pitsaboana any amin'ny tanàna hafa izany dia mila mandalo any amin'ny birao samihafa sy mahazo ny alàlana izay mety tsy ho azo eo no ho eo vao afaka manao izany izy ireo. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fampitsaharana ny vohoka tsy niriana ara-potoana ity tranga ity ary manery ny vehivavy hanao fanalan-jaza tsy azo antoka ka mety hiafara amin'ny fahafatesany mihitsy aza.
Na dia tsy voafaritra mazava aza ireo tarehimarika ireo dia tombanana fa vehivavy miisa 400.000 eo ho eo any Kolombia no manao fanalan-jaza tsy azo antoka isan-taona ary vehivavy miisa 70 no maty noho ireo dingana tsy maintsy arahina ireo.
“Tokony omena antoka mandritra ity vanim-potoanan'ny fahamehana manerantany ity ​​ny fanohizana ny [zon'ny fanalan-jaza eo ambanin'ireo fepetra telo] ireo”, hoy i Soto.
Hisy fiantraikany eo amin'ny mpifindra monina Venezoeliana ihany koa izany
Na dia eo aza ny fanakatonana ny sisintany dia mbola mandeha an-tongotra miampita izany ireo mpifindra monina Venezoeliana kivy noho ny fahantrana lalina sy ny fitotongan'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny fireneny ary mamakivaky lalana tsy ara-dalàna sy lalankely. Tsy voavahan'ny manampahefana izany toe-javatra izany ka vao mainka mametraka ny vehivavy sy ny tovovavy mpifindra monina eo anatrehan'ny lozan'ny fanondranana olombelona sy ny herisetra ara-nofo.
“Amin'ny fihomboan'ny faharefoana, mora ielezan'ny tsimokaretina sy ny tsy fisian'ny manampahefana ara-pahasalamana manara-maso ny sisintany dia ahiana indrindra hifindran'ny tsimokaretina mora kokoa ireo vehivavy [mpifindra monina] ary ho sarotra bebe kokoa ho azy ireo ny hanatona toeram-pitsaboana”, hoy i Soto. Ireo vehivavy bevohoka sy mampinono no tena iharan'izany.
Efa hita ny famerana ny servisy ara-pananahana sy ny fiterahana araka ny filàn'ireo vehivavy mpifindra monina na dia talohan'ity areti-mandringana ity aza, amin'ny fisian'ny mpifindra monina efa ho 2 tapitrisa any Kolombia. Tsy mahafantatra ny zony sy ny fiarovana azy ireo araka ny lalàna ny ankamaroan'izy ireo ary miatrika sakana sy fanaovana tsinontsinona avy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izy ireo matetika.